यस्ता कामका लागि आशक्त एक शिक्षिकालाई १५ वर्षका विद्यार्थीसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा ६ वर्षभन्दा धेरैको जेल !! – News Nepali Dainik
यस्ता कामका लागि आशक्त एक शिक्षिकालाई १५ वर्षका विद्यार्थीसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा ६ वर्षभन्दा धेरैको जेल !!
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७७ समय: ६:३८:४०
यौनका कामका लागि आशक्त एक शिक्षिकालाई १५ वर्षका विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखेको आरोपमा ६ वर्षभन्दा धेरैको जेल सजाय सुनाइएको छ । ३५ वर्षकी केन्डिस बार्बरलाई बिहीबार सजाय सुनाइएको हो । १५ वर्षका विद्यार्थीसँग खुला चौरमै यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएकी बार्बरलाई ६ वर्ष २ महिना जेल सजाय सुनाइएको छ ।
Last Updated on: March 7th, 2021 at 6:38 am